в Analytics, Sheekada Guusha, Dib u warshadaynta
Saddex sano hadda, Amil LLC waxay ka shaqeyneysay Gobolka Nizhny Novgorod, oo ah shirkad wax soo saare ka sameysa burooyinka wax laga beddelay, oo ay si wada jir ah u abuureen shirkadda caanka ah ee reer Sweden ee Lyckeby Starch AB, oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha adduunka ee warshadaha "istaagga".
Waxaan kala hadalnaa Oleg Martyanov, oo ka mid ah aasaasayaashii shirkada ruushka, sida loo abuuray, cidda ay u samayso wax soo saarkooda, iyo sida ay u qorsheynayso kordhinta wax soo saarka.
- Oleg Alexandrovich, sideebay taasi u dhacday taasi Lyckeby noqday la-aasaasaha shirkad ku taal gobolka Ruushka?
- Taariikhda muuqaalka Amil waxay xiriir dhaw la leedahay howlaha Xarunta Starch Center. Hay'addu waxay la shaqeyneysay shirkadda iswiidhishka ah ee 'Lyckeby' muddo 20 sano ah, taasoo gaarsiin doonta kaarka casriga ah ee ay astaan ​​u leedahay suuqan Ruushka.
Warshadda Lyckeby ee dalka Sweden
Waqti dheeri, Starch-Center wuxuu faray qeyb kamid ah faaiidooyinkeeda wax soo saarka istaarijka gudaha ee Russia wuxuuna ka helay labo dhir gaar ah - mid kamid ah gobolka Nizhny Novgorod (Plar Plant Plant) iyo kan kale ee Oryol (Pleshcheevsky Starch Plant). Dabcan, waxaan dooneynay inaan soo jiidanno soo-saare caan ah oo caan ah oo reer Yurub ah sida Lyckeby mashruucan, laakiin shirkadda Iswidishka ayaa markii hore diidmo ka muujisay. Wakiillada Lyckeby waxay yimaadeen mid ka mid ah dhirta, waxay qiimeeyeen xaaladiisa waxayna si cad u diideen inay wada shaqeeyaan. Laakiin waqti ayaa laga soo gudbay, iyo waqtiyada qaar, hogaamiyaasha walaacyada iswiidhishku waxay garteen inay faa'iido badan u tahay inay soosaaraan istaarix macmiil Ruush dhulkiisa, halkii ay ka keeni lahaayeen alaabada dibada. Marka, sannadka 2015, shirkadda Amil ayaa la sameeyay, iyo 2017, wax soo saar ayaa la bilaabay.
Warshadeena waxay ku taalaa degmada Pochinkovsky ee gobolka Nizhny Novgorod, waxay ku taalaa dhulka warshadaha istaarijka Syryatinsky. Shirkadda waxaa ku qalabeysan qalab casri ah waxayna ku shaqeysaa tikniyoolajiyadaha Yurub ee waxtarka leh.
- Amil waxay soo saartaa marxaladaha cuntada lagu beddelay Ma waa badeecad la suuq gayn karo?
- Macmiil yarida kama lihin. Istaarijka la beddelay - qayb muhiim u ah soosaarka alaabada hilibka iyo badeecooyinka-dhammeystiran, waxaa loo isticmaalaa soosaarka suugada tamaandhada, majones, waxyaabaha caano-dhanaan ah. Laakiin mugga wax soo saarka ee xididdada noocaas ah ee Russia waa yar yihiin, marka lagu daro warshadeena, kaliya ND-Technik LLC (Stavropol Territory) ayaa u shaqeeya baahiyaha wershadaha cuntada. In kasta oo tan, dabcan, micnaheedu maahan inaysan jirin wax tartan ah oo ka jira suuqa. Xiddigaha la beddelay ayaa si firfircoon looga soo qaataa waddamada Yurub, soosaarayaasha shisheeyuhu waxay leeyihiin faa iidooyin qaarkood annaga. Tusaale ahaan, mugga wax soo saarka leh.
Amil wali waa shirkad yar. Waxaa markii hore looraystay naqshadeeye - iyada oo leh awood si tartiib tartiib ah, "leben bir ah", si loo kordhiyo mugga wax soo saarka. Nasiib darrose, xawaaraha horumarkiisu ma ahan sidii aan jeclaan lahayn.
Sababo badan oo ujeeddo leh ayaa jira. Midkood waa kor u kaca qiimaha kiimikada ah ee lagama maarmaanka u ah wax soo saarkeena. Markii aan xisaabineynay qiimaha alaabada mustaqbalka, Russia waxaa ka jiray seddex warshadood oo soo saarista waxyaabaha kiimikada ah ee aan u baahan nahay, iyo markii la bilaabay Amil, mid keliya ayaa ku haray suuqa, kaas oo, isagoo noqday hanti-wadaaga, kor u qaaday qiimaha ka sarreeya qiimaha Yurub.
Hadda wax soo saarkeenu waa ugu dhawaan saddex meelood meel wixii aan sameyn karnay.
- Amil waxay soo saartaa xidido iyadoo lagu saleynayo baradho iyo hadhuudhka alaabta ceeriin. Jihada “baradhada” ama “hadhuudhka” ma waxay muhiim ugu tahay shirkada (haddii isbarbar dhigga noocaas ahi sax yahay)?
- Nooc kasta oo ka mid ah alaabadayada ayaa loogu talagalay in lagu soo saaro alaabooyin gaar ah, mid walbaa wuxuu leeyahay macmiil u gaar ah, markan macnaheedu yahay labada jihoba muhiim bay noo yihiin.
Laakiin baradho wali waa mudnaan. Aan idin xasuusiyo in wada-lahaanshaha shirkaddeenu ay tahay shirkad gacanta ku haysa iswiidhish ah oo ku takhasustay soo saarista iyo ka shaqaynta baradhada ku dhawaad ​​boqol sano. Dhanka Lyckeby, baradhada ayaa ah sheyga 1.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan ku jirnaa gobol ay baradho aad uga badan yihiin hadhuudhka. Marka baradho ayaa noo soo dhowaada, waana kuwa inaga dhaw.
- Welwelka Lyckeby, sidaad ogtahay, waxay ka tirsantahay beeralley beero ah oo aaggaga ugu weyn ee waxqabadka ay ku beeranayso baradhada si loogu isticmaalo warshadaynta istaarijka. Shirkaddaadu ma qorsheyneyso inay abaabusho wax soo saarka alaabta ceeriin ee beeraha Ruushka "si hagaagsan", oo ku saleysan khibradda iswiidhishka?
- Si adag u hadal, Amil kuma shaqeeyo baradhada. Shirkadeena waxay iibsataa istaarijiska wadaniga ah ee warshad istaarijka Syryatinsky. Laakiin arrimaha la xiriira tayada iyo tirada alaabta ceyriinka ah ayaa sidoo kale si toos ah annaga noo khuseeya.
Amil waxay qorsheyneysaa inay horumariso wax soo saarka, taasina waxay ka dhigan tahay in baahiyaha shirkada loo baahan yahay ee alaabooyinka ceeriin ah ay koraan, isla markaana waqti yar gudaheed aan ku sii socon karno yaraanta Sidaa darteed, marka ugu horreysa, waa inaan tixgelinnaa suurtagalnimada kordhinta wax soo saarka warshadda Syryatinsky.
Imminka inta badan barandhada la keenay Syryatino waxay ku jirtaa istaarij istaariji ah oo ah 10%. Warshaddu waxay ku shaqeysaa qashinka. Xaddiga baradhada soo galaysa sidoo kale way kala duwantahay bil ilaa bil. Si aan u dammaanad qaadno inaan helno tiro ka mid ah agab ceyriin ah oo aan u baahan nahay, waxaan bilaabeynaa barnaamij aan ku horumarineyno wax soo saarka baradho aad u sarreeya. Ma dhihi karo waxaan si buuxda u wareejin doonnaa khibradaha iswiidhishka, laakiin waxaan isku dayi doonnaa inaan adeegsano ku dhaqanka ugu wanaagsan.
Barnaamijkan, waxaan horeyba uga doorannay dhowr beeralley Nizhny Novgorod ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha caadiga ah waxaanan u wareejinay inay ku beero noocyo abuur leh leh istaarji sare leh oo loogu talagalay abuuritaanka.
Saddex sano gudahood waxaan qorsheyneynaa inaan gaarno mugga iibsiga ee 40 kun oo tan oo baradho ah (oo ay lasocdahay 20%) sanadkii.
- Nooga warran wax badan oo ku saabsan noocyada.
- Waxaan jeclaan lahaa inaan la shaqeeyo noocyo iswiidhish ah. Kuwani waa guulaha ay gaareen kuwa caanka ah ee caanbaxay, natiijada sanado badan oo shaqo ah oo saynis ah, oo sifiican loogu xaqiijiyay dhaqan ahaan. Laakiin, nasiib xumo, Suuragal ma ahan in Ruushka la keeno baradho abuur iyada oo aan sannado badan la oggolaanin, sidaa darteed sanadkaan waxaan ka doorannay noocyo ka mid ah kuwa loo oggolaaday in loo isticmaalo waddankeenna.
Asxaabteena Lyckeby waxay siin doonaan beeraleyda taageero beero fog. Marka hore, beeralleydu waa inay bixiyaan macluumaad ku saabsan xaaladda dhulka, asal ahaanna waxay heli doonaan talooyinka tikniyoolajiyada ugu horreeya.
- Qandaraasraduhu ma muujinayaan qiimaha ay baradhada uga soo iibsan doonaan beeralayda?
- Haa. Iswidhan, qiimaha ayaa go'an, oo waxaan isku daynaa inaan raacno isla waddadan. Ogeysiis muhiim ah: qiimaha kuma xirna culeyska badan, laakiin waa boqolkiiba istaarijka digriiga. Taasi waa, beeraleydu waxay si toos ah lacag ugu heshaa istaarijka ku jira baradhada.
Laakiin waxaan fahamsanahay in xaaladda suuqa aysan xasilloonayn, sidaa darteed, heshiiska ayaa qeexaya suurtagalnimada in dib loo eego qiimaha haddii ay jiraan isbeddelo waaweyn.
- Waxaan badanaa maqlaa fikradda ah in aysan faa iido lahayn in la soo saaro istaariji ka noocyo gaar ah oo baradho ah oo aan ahayn khadadka wax soo saarka ugu badan ee dhirta guryaha. Faa'iidadaas ayaa la ilaaliyaa oo keliya marka laga hadlayo qashinka ay beeralaydu siinayaan lacag dhan. Tani run ma aha?
Fikradayda, beeralleyda ayaa horay u sii qoondayn kara qayb ka mid ah aagga lagu beero baradhada cuntada, iyo qayb - alaabada alaabada loogu talagalay, sidaas darteedna ay fursad u helaan "in aan ukunta la gelin hal dambiil", taas oo muhiim u ah xaaladda hadda jirta.
- Iyo xaalada. Amil ma dareentaa cawaaqib xumada masiibada gu'ga 2020 (xiritaanka xuduudaha, xasillooni darrada sarrifka, iwm)? Faafida masiibo sikastaba ma wax ka beddeshay qorshooyinkaaga?
- Waxaan la kulanay dhibaato culus markii, oo ay weheliso warshadaha gudaha oo dhan, geedka kaliya ee sameeya kiimikooyinka na joojiya shaqada. Markaa, si caalami ahaan loogu hadlo, waxaan uga gudubnay dhammaan dhibaatooyinka isku midka ah sidii hore. Asal ahaan, waa dabiiciyan xafiis ahaan. Awoodda dowladnimo ee nidaamka sharci-darrada ah ee dalka ka jirta ayaa xakameyneysa horumarka bulshada oo dhan iyo dhaqaalaha ka xoog badan virus kasta. Iswidhan, laga yaabee, inay dhistay bulsho hantiwadaag ah oo ka badan tii ay ku jirtay USSR. Wixii hadda nagu dhacayna waxay ku dhowdahay feudalismka, qarniyadii dhexe.
Ma garan karo isbeddello la dareemi karo oo ku saabsan baahida loo qabo istaarijka. Saddexdii bilood ee hore, waxaan duubnay koror muddo-gaaban ah oo xagga iibka ah, laakiin tan waa la fahmi karay: shirkaduhu way keydsan yihiin sidaa darteed mar marka qaarkood si lama filaan ah uma sii joogi lahayn iyada oo aan agab lahayn. Hadda wax walba waxay ku noqdeen tilmaamayaasha caadiga ah, ilaa iyo hadda ma aragno waxyaabaha looga baahan yahay isbeddelada: karantiilnimada dadku waxay cunaan qiyaas la mid ah tan la'aanteed. Marka waxaan u shaqeyneynaa sidii qorshuhu ahaa.
Tags: 2020 .2Gobolka Nizhny NovgorodООО "Амил"soosaarka istaarijka baradho
In ka badan 400 kun oo tan oo baradho ah ayaa laga soo gooyey gobolka Nizhny Novgorod
Ka goosashada minitubers-ka baradhada laanta Nizhny Novgorod ee Hay'adda Miisaaniyadda Dowladda Federaalka "Rosselkhoztsentr"